Shirkadda Caymiska Islaamiga ah ee Takaaful oo xarigga laga jaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Shirkadda Caymiska Islaamiga ah ee Takaaful oo xarigga laga jaray “SAWIRRO”
Munaasibad xarigga looga jarayey howlgelinta shirkadda Ceymiska oo ay ka qeyb-galeen Wasiirro ka tirsan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Furitaanka bilawga hawsha Shirkada Caymiska Islaamiga ah ee Takaaful ayaa waxaa ka qaybgalay Mas’uuliyiin isugu jirta Wasiiro, Ganacsato Maamulka Gobolka Banaadir iyo Xubna kale oo xafladda lagu casuumay, iyadoo si rasmi Shaqada Shirkadaasi Caymiska Islaamiga ah ay xariga ka Jareen Wasiirka Batroolka iyo Macdanta ku-simaha Guddomiyaha Gobolka iyo Xubno kale.
Guddomiyaha Shirkadda Caymiska Islaamiga ah ee Takaaful Maxamed Cabdi Maxamed ayaa tilmaamay in shirkadda Caymiska Islaamiga ay bulshada u hayso adeegyo kala duwan, ayna diyaar u yihiin u adeegidda shacabka.
Ku-simaha Guddomiyaha Gobolka Ahna Guddoomiye ku-xigeenka Maaliyadda Mudae Ismaaciil Macalin Cabdi Guure ayaa amaanay doorka Shirkadan iyo waxa ay ku soo kordhin karto Shacabka ku nool Gobolka Banaadir.
Wasiirka Batroolka iyo Tamarta Mudane Maxamed Mukhtaar ayaa dhiirigaliyay dadaalka ganacsatada ay ku furanayaan xarumo loogu adeegayo bulshada.
“Waxaa sharaf ii ah in aan idinkala qeyb galo furitaanka shirkaddan, runtii Soomaaliya hadda ayay fursad haysataa, waxaana ka faa’iideysanaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay, Ceymiska waxa uu kabayaa dib u soo nooleynta dhaqaalaha dalka” ayuu yiri Wasiirka Tamarta.
Sidoo kale Wasiirka Ganacsiga iyo Warashadaha ee Xukumadda Soomaaaliya Mudane C/raxmaan Cabdi Cusmaan ayaa talaabo wanaagsan ku tilmaamay in Soomaaliya ay hesho Shirkad Caymis oo Islaami ah, isagoo Bogaadiyay ganacsatadii doorkaasi gacan ka geystay.
“Runtii shirkadan waxa ay fariin u tahay shacabka Soomaaliyeed, maadaama wax la ceyminayo, ganacsatada waxa ay u istaageen inay dib u soo nooleeyaan adeegyadii ganacsi, marka waa arrin fiican” ayuu yiri Wasiirka Ganacsiga.
Shirkadda ayaa labo xafiis ka furatay Degmooyinka Xamarweyne iyo Shangaani, kuwaasi oo loogu adeegi doono bulshada nool caasimadda.
Ardayda Jaamacadda Camuud oo adeegyo caafimaad u qabtay bukaanno “SAWIRRO”
Ururka haweenka Wazda oo maanta tababar u soo xiray 180 haween ah "Dhageyso+Sawirro"